သြစတြေလျမှာ အမျိုးသ္မီး ခြောက်ယောက်မှာ တစ်ယောက် ကြင်ဖေါ်မှ အကြမ်းဖက်တာ ခံနေရ။
သြစတြေလျံ အမျိုးသ္မီး ခြောက်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က လက်ရှိ ဒါမှမဟုတ် ယ္ခင် ကြင်ဖေါ်ထံမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကို ခံနေရတယ်လို့ ခန့်မှန်ထားပါတယ်။
ကျောင်းတွေမှာ ဓါတ်ပုံတွေကို တလွဲသုံးတာတားမြစ်ဘို့ အာဏာပိုင်များ ၀င်ရောက်စွတ်ဖက်။
အသက် ၁၈ နဲ့ ၂၄ နှစ်ကြား သြစတြေလျံ ၅ ယောက်မှာ ၁ ရောက်က သူတို့ဓါတ်ပုံကို မတော်တရော်သုံးတာကို ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရေရှားပါးမှုက အနာဂတ်မှာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့တွက် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေ။
သြစတြေလျ အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်များဖြစ်တဲ့ ကွင်းစလန် ကနေ Tasmania ထိ မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် ကြီးမားတဲ့ ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကို ခံနေရပါတယ်။
HIV ဗိုင်းရတ်ပိုးသစ် တွေ့ရှိမှုကြောင့် နောက်ထပ်ကမ္ဘာအနှံ့ ရောဂါပျံ့မှုကို တားဆီးနိုင်လိမ့်မ
၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေက ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အနေနဲ့ အမြင့်ဆုံးရောက်နေရာကနေ၊ H-I-V/AIDS ဗိုင်းရတ်ပိုးကို ကုသတဲ့နေရာမှာ အတော်လေးခရီးရောက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
What is schoolies week? - သြစတြေးလျနိုင်ငံ အခြေချ နေထိုင်ခြင်းလမ်းညွန် - Schoolies Week ဆိုတာဘာလဲ။
School graduation holds significant meaning to adolescents worldwide. - အထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် မှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့အချိန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
What it means for Myanmar in facing ICC and ICJ's investigations? - ICC နဲ့ ICJ က လက်တစ်ဖက်နဲ့ မဖမ်းနိုင်တာကို နှစ်ဖက်နဲ့ ဖမ်းအောင် လုပ်ဆော
Myanmar is facing international investigations over its treatment of Rohingya muslims. - အခုလောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာပျက်စရာတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
Myanmar faces opposition to its coal power stations in ethnic areas - တစ်နိုင်ငံလုံး မီးလင်းရေးအိပ်မက်နဲ့ ကျောက်မီးသွေးရင်းမြစ် ပြဿနာ
Electricity an essential thing for every country in the world and for Myanmar, coal-fired power plants are one of the main sources of its energy. - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ကျောက်မီးသွေးဟာ အာရှနိုင်ငံ အများအပြားအတွက် အဓိက စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။
NSW တောမီးရဲ့ နောက်ဆုံးရ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်
သိပ္ပံအချက်အလက်တွေအရ သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ တောမီးရာသီဟာ အလာစောပြီး အထွက်နောက်ကျတာမျိုး ပိုဖြစ်လာသလို လောင်ကျွမ်းတဲ့ မီးတွေဟာလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လှတယ်ဆိုတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
Perinatal depression and anxiety is costing Australia $877 million annually - ကလေးရခါစမှာ မိဘတွေ ခံစားရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာက နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၈၇၇ သန်း ကု
This week marks Perinatal Anxiety &amp; Depression Awareness Week. [[Nov 10-17]]Health experts and support groups are using the event to call for more awareness and education on the issue, which affects 100,000 Australian families each year. - ဒီသတင်းပတ်ဟ...
သြစီတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာ သင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ ဆရာမ Yuri Takahashi နဲ့မေးမြန်းချက်
သြစတြေးလျ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်ကနေ ဘာသာစကား အမျိုး ၃၀ လောက်ကို သင်ကြားပို့ချပေးနေတာရှိပြိး အဲဒီအထဲမှာ မြန်မာစာပေနဲ့ မြန်မာစကားလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Scientists say Australia is facing an extinction crisis, call on PM to strong laws - သဘာဝဂေဟစနစ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် သြစီရဲ့ ဌာနေ တိရိစ္ဆာန်
More than 240 scientists have added their names to an open letter to Prime Minister Scott Morrison calling for stronger environment laws. - ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံက သတင်းတွေကို ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တောမီးလောင်တဲ့သတင်း၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူတွေကို အစိုးရက ဒေါ်လာ...
European satellites collect Australian environmental data - ဥရောပ ဆက်တလိုက်တွေ သြစီရဲ့ သဘာဝဘေးကို လေ့လာနေ
A series of European satellites have been orbiting above Australian skies to collect data on natural disasters.But while it's too late to help with the current drought, scientists are hopeful it can better equip authorities in the future. - ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြေ...
Intellectual disable children are still discriminated in Myanmar - မှိန်ဖျော့နေဆဲ မသန်စွမ်း မြန်မာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်
Although Universal Declaration of Human Rights was ratified in 1948, many people around the world are still seeking to gain the rights that are taken away or never granted to them. - ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး တန်းတူညီမျှမှုကို အလေးထားလာကြပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ြ...
Viva: Re-imagining aged care in Australia part2- သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်မှုကို ပြန်လည်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်
The Interim Report by the Aged Care Royal Commission revealsasubstandard residential aged care sector plagued by poor care and safety standards. - အရင်တစ်ပတ်တုန်းကပဲ သက်ကြီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ဗီဗာအစီအစဉ်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံက သက်ကြီးစောင့်ရှောက်မှုပုံစံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် တီထွင်ခြင်းအကြောင်း အပိုင်း ၁ ကို တင်...
What is palliative care and who is it for? - Palliative care ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်သူတွေအတွက်သာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလဲ။
Death isanatural process of human life but that is the one thing that not many people want to face or discuss about. - သေခြင်း တရားဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်ပဲဆိုပေမယ့် သေခြင်းတရားအကြောင်းကို လူတွေ သိပ်ပြီး မရင်ဆိုင်ချင်ကြသလို ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း မလုပ်လိုကြပါဘူး။
Better migrant job matching could boost Australian economy by $6 billion annually - ပြည်ပမှာ တတ်တဲ့ပညာကို ပြန်သုံးခွင့်ရကြရင် သြစီအတွက် ဒေါ်လာ ၆
New research has found that addressing the mismatch between the skills of migrants and the jobs they currently work in, could boost the Australian economy by six billion dollarsayear. - ပြည်ပကနေ သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူအများအပြားဟာ သူတို့နိုင်ငံမှာ တတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အရာေ...
Viva: Re-imagining aged care in Australia part 1 - သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်မှုကို ပြန်လည်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း
Shocking stories heard in the Aged Care Royal Commission highlight the inadequacy of conventional aged care facilities in providing safe and quality care for our frail elderly. - သြစတြေးလျနိုင်ငံတဝှမ်းက သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ aged care တွေမှာ သက်ကြီးတွေအပေါ် နှိပ်စက်မှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မ...
Global MIL Week 2019: Fake news in Myanmar - သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေနဲ့ စီးချင်းထိုးနေရဆဲ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်
Yangon based SBS Burmese reporter talked to Myanmar media expert about how fake news and false information has become one of the main challenges for Myanmar reform during the week of global celebration for Media and Information Literacy (MIL). October ...
Warning to asthma sufferers amid bushfires, thunderstorms - တောမီးလောင်မှုတွေနဲ့ မိုးသက်မုန်တိုင်းတွေကြောင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိ
A severe asthma warning has been upgraded in parts of the country with authorities concerned air quality could pose health concerns.The smoke haze that's blanketed Sydney is expected to remain over the weekend, while Melbourne is facing thunderstorms t...
Sexual harassment and your rights in the workplace - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အရေး
According to the latest survey from the Australian Human Rights Commission, one in three workers say they've been sexually harassed at work over the last five years. - သြစတြေးလျား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးလေ့လာချက်ရဲ့အဆိုအရ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅နှစ်အတွင်း အလုပ်သမား သုံးဦးအနက် တဦးဟာ လုပ်ငန်း...
What is Nobel prizes and let's look at Nobel Physics and Nobel Peace Prize - နိုဘယ်ဆုဆိုတာ ဘာလဲ၊ ရူပဗေဒဆိုင်ရာဆုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအကြော
This month, noble prizes were awarded to people who contributed greatly to society and humankind. - ဒီအောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းကနေ အောက်တိုဘာလလည် အထိ နိုဘယ်ဆု ချီးမြင့်ခံရသူတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
How do you become one of Australia's richest young people? - အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကြသလဲ
The Australian Financial Review's annual Young Rich List is out and, apart from meeting the age criteria for 'young', which is under 40, you have to be worthalot of money. - ဒီနှစ်အတွက် Australian Financial Review ရဲ့ Young Rich List လူငယ် သူဌေးများ စာရင်းအရ ပိုက်ဆံတွေ...
First-home buyer scheme capped as Labor calls for more details - ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ဝယ်လိုသူတွေ စရန်ငွေ ၅%နဲ့ ဝယ်လို့ရပြီ
A Chin politician, rights activist and feminist shares her thoughts while in Australia - ချင်းနိုင်ငံရေးသမား၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ချယ်ရီဇာေ
Cherry Zahau isaChin rights activist, feminist and politician andamother of two young children from Myanmar. - ချင်းအမျိုးသမီး ချယ်ရီဇာဟောင်းဟာ မြန်မာအမျိုးသမီးရေးရာ မြင့်တင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ် တချို့နဲ့အတူ အရင်ရက်ပိုင်းတုန်းက သြစတြေးလျနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Settlement Guide: How to Prevent Drowning? - အခြေချနေထိုင်ခြင်း လမ်းညွန် - ရေနစ်မှု မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ
With another scorching summer approaching, authorities are pleading with swimmers to use caution as the number of people drowning has jumped by ten per cent since last year. - ခုချိန်ဟာ နွေဦးရာသီဖြစ်ပြီး မကြာခင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီ ရောက်လာမှာဖြစ်လို့ လူတွေကလည်း ကမ်းခြေတွေ၊ မြစ်ချောင်းတွေကို ...
Unity in diversity and the future of Myanmar - အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်
Diwali (also Deepavali) is one of the biggest religious festivals in the world. - ဒီအချိန်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဒေဗာလီပွဲတော်ကို ကျင်းပကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Climate change, population growth the greatest threats to food security - ရာသီဥတုပြောင်းလွဲမှုနဲ့ လူဦးရေကြီးထွားမှုက ကမ္ဘာ့အစားအစာ လြုံ
Anti-hunger advocates say populations need to shrink to ensure the world's people can have secure access to food. - အစာငတ်မွတ်မှုတွက်ဆန့်ကျင် ရှေ့ဆောင်လုပ်နေသူများက လက်ရှိလူဦးရေ လျော့နည်းသွားဘို့ လိုအပ်နေပြီး၊ ဒါမှသာ ကမ္ဘာလူထုတွက် အစားအစာ ရရှိဘို့ အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Dr. Thinn Thinn Khine and "Things could be worse Art Show" - ဒေါက်တာ သင်းသင်းခိုင်နဲ့ “အခြေနေတွေက ပိုဆိုးနိုင်တယ်” ပန်းချီပြပွဲ။
Dr Thinn Thinn Khine who is Endocrinology Advanced Trainee and also an artist is going to exhibit her art show “Things Could Be Worse” at The Paper Mill Gallery, Fyansford on the 26th, 27th October 2nd, 3rd November 2019. - ဒေါက်တာ သင်းသင်းခိုင်ဟာ အဆင့်မြင့် Endoc...
Freedom of the press under scrutiny in Australia - သြစတြေလျမှာ သတင်း လွတ်လပ်မှု စိစစ်ကြည့်ခံနေရ။
A Senate communications committee is currently investigating the issue of press freedom and whistle-blower protection as journalists face increased scrutiny while doing their jobs. - သတင်း လွတ်လပ်မှု နဲ့ တိတ်တခိုး သတင်းပေးသူများ အကာကွယ်ပေးဘို့တွက် ဆီးနိတ် ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီက လတ်တလော စုံစ...
New device allows pregnant women to monitor their baby's health at home - ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ သူတို့သန္ဒေသား ကျမ်းမာရေးကို ကရိယာသစ်က
A new device being trailed in Melbourne is expected to allow expectant mums to monitor their babies from home. - မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ စမ်းသပ်နေတဲ့ ကရိယာအသစ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသ္မီးတွေ အိမ်ကနေသူတို့ရဲ့ သန္ဒေသားရဲ့ ကျမ်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Questionable rule of law and safety of the ordinary people. - မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသော တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀
The rule of law has beenamajor disagreement between successive governments and the people. - တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ပြည်သူတွေကြား အငြင်းပွားစရာတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
A new device being trialled in Melbourne is expected to allow expectant mums to monitor their babies from home. - မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ စမ်းသပ်နေတဲ့ ကရိယာအသစ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသ္မီးတွေ အိမ်ကနေသူတို့ရဲ့ သန္ဒေသားရဲ့ ကျမ်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Terrible dilemma faced by migrant women who are victims of domestic violence - အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ကြုံရတဲ့ မိုင်းဂရန့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ေ
A new report has found migrant women on temporary visas who experience family violence are often left to suffer in silence because of fears they will be deported if they seek help. - အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုအရ ပြည်ပနိုင်ငံကနေ လာပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ယာယီဗီဇာနဲ့ နေထိုင်ရသူ အမျိုးသမီးတွေဟာ အိ...
Dr Myint Cho discussed about activists' rights and freedom of media in Australia. - ဒေါက်တာမြင့်ချိုက သြစတြေလျရဲ့ ဆန္ဒပြသူများ အခွင့်ရေးနဲ့ သတင်
Queensland proposed law will send activists to two years jail, NSW Right to Farm Bill will send activists to three years jail and Federal government curbs on journalist can send them to jail also. - ဆန္ဒပြသူများကိုသူတို့ချမှတ်မဲ့ စည်းမျဉ်တွေကို မလိုက်နာပါက Queensland က ပြုလုပ်မဲ့ဥပေ...
Fears planned protest laws could undermine activists' rights - တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အခွင့်ရေးကို စီစဉ်ရေးဆွဲနေတဲ့ ဥပဒေက ခြိမ်းခြေ
Queensland premier Annastacia Palaszczuk announced she wants to fast-track laws that could see activists jailed up to two years if they use so-called dangerous attachment devices. - Queensland ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Annastacia Palaszczuk ကသူမခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ကရိယ...
Young women and girls say climate change is the most pressing issue - ၂၀၁၉ နိုင်ငံတကာ မိန်းကလေးငယ်များနေ့။
Young women and girls in Australia have named climate change as the most pressing issue facing the world and their own futures. - သြစတြေလျံ အမျိုးသ္မီးငယ်များနဲ့ မိန်းကလေးများက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းက၊ ကမ္ဘာနဲ့ သူတို့အနာဂတ်တွက် အပူတပြင်း အရေးကြီးဆုံး အချက်လို့ပြောဆိုပါတယ်။
Karen still longs for development project in their area - ကရင်ပြည်နယ်က ၀ိုင်းထူဖို့ လိုအပ်နေဆဲ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
It has been4years since the Myanmar government and Karen National Union signed Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ လေးနှစ်ပြည့်လုနီးပါးဖြစ်လာပါပြီ။
Viva: Warning Signs ofaHeart Attack - နှလုံးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခာဏာများ
Do you know how healthy your heart is?It’s worth knowing the answer since coronary heart disease is the leading underlying cause of death in Australia. - သက်ကြီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ Viva အစီအစဉ်အရ ဒီကနေ့မှာတော့ နှလုံးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခာဏာအကြောင်း ရေးထားတဲ့ Amy Chien-Yu Wang ...
Settlement Guide: Living in Regional Australia - သြစတြေးလျရဲ့ နယ်မြို့လေးတွေမှာ နေထိုင်ခြင်း
Nearly all newly arrived migrants settled in Melbourne and Sydney last year while regional Australia is struggling to survive withashrinking population. - သြစတြေးလျနိုင်ငံအခြေချနေထိုင်ခြင်းလမ်းညွန် Settlement Guide အစီအစဉ်အရနယ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Interview with activist monk, Ashin U Thaw Pi Ta - ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနဲ့ လူမှုရေးရာလှုပ်ရှားသူ အရှင် ဦးသောပိတနဲ့ မေ
Saffron revolution activist and social activist monk, Ashin U Thaw Pi Ta is in Australia. He is well known for his writing and opinions on Myanmar’s current affairs. - ရွှေဝါရောင် တော်လှန်းရေး၊ နာဂစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာတော် ဦးသောဘိတဟာ အခုလောလောဆယ် သြစြေ...
Myanmar artist awarded for Melbourne’s Art Tram Project - ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဖိုးစိန်ရဲ့မြေး ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီ မဲလ်ဘုန်းမှာ
Myanmar artist and designer Dr Nyein Chan Aung has been awarded for his The Late Supper artwork. - အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ tram တချို့မှာ မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ အနုပညာ လက်ရာတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
A plan to move unemployed migrants to country Victoria - အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူ migrant တွေကို နယ်ဒေသမှာ အလုပ်ရှာပေးဖို့စီစဉ်
A plan has been unveiled to help 50 migrant families find jobs, homes and networks in regional Victoria over the next couple of years, while boosting small rural population numbers. - ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရဲ့ နယ်ဒေသတွေမှာ လူဦးရေ ပိုများလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး မြို့ကြီးမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ...
Burmese born Australians are unhappy with Myanmar visa restriction - ဆိုက်ရောက်ဗီဇာက မြန်မာပြည်ဖွား သြစီတွေအတွက် မဟုတ်တဲ့အပေါ် မကျေနပ်
Myanmar government is introducing new regulations to facilitate easier access for Australia, Germany, Italy, Russia, Spain and Switzerland passport holders. - အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ရုရှားနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ဗီဇ...
Research on Myanmar people's eating habit to aid health service providers - မြန်မာအတွက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရဖို့အတွက်ြ
A new research project by Swinburne University of Technology is finding out about Myanmar people's food habit and it is aiming to share their finding to Burmese health providers so new and emerging community will receiveabetter care. - မဲလ်ဘုန်းမြို့က Sw...
Kachin women in IDP camps worried for their health - ကျန်းမာရေး စိတ်အေးစေလိုသော စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးများ
Fighting between Myanmar army and ethnic arm groups has driven people away from their homes. - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခတွေက ပြည်သူတွေကို စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ ခိုလှုံစေခဲ့ပါတယ်။
Viva: Getting married again - နောက်တစ်ကြိမ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း
It’sacommon portrait of modern family life with the last census showing that aboutafifth of Australians had been married before. Whether you feel ready or not to try the knot again, there are complexities that come with age. - သက်ကြီးပိုင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့...
Kachin in Australia met to"Uphold values, tradition and strengthen Kinship and identities" - သြစတြေးလျရောက် ကချင်တွေ စုပေါင်တွေ့ဆုံပွဲ ၃ ရက်ကြာ ပြု
Kachin people from around Australia andafew special guests from Myanmar camped together in Victoria for their 6th combined camp. - ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲ သြစတြေးလျရောက် ကချင်တွေ စုပေါင်းပြီး တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Chin are prohibited from carrying traditional Chin knife - စည်ပင်နယ်ထဲ ဓားပလိုင်း လွယ်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတဲ့အပေါ် သြစီရောက် ချင်းတွေ
Chin are prohibited from carrying their traditional Chin knife in some municipals in Chin State. - ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကန်ပလက်မြို့ပေါ်အတွင်းမှာ ရိုးရာ မြို့ရဲ့စည်ပင်နယ်ထဲ ဓားပလိုင်း လွယ်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတဲ့အပေါ် သြစီရောက် ချင်းတွေရဲ့ အမြင် နဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်တာတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ကန်ပလက်ဒေသခံတွေကို ကိုးကားပြီ...
Settlement Guide: How to getadivorce in Australia? - သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ လင်မယားခြင်း ဘယ်လို ကွာရှင်းပြတ်စဲကြမလဲ
Research by the Australian Institute of Family Studies shows that people in their mid to late 20s are the most likely to divorce followed by couples in their late 40s. And those who get divorced have usually been married nine years or less. - သြစတြေးလျနိုင်...
Myanmar is implementing Unicode system from 1 October - ယူနီကုတ် ပြောင်းမယ့်အပေါ် သြစီရောက် မြန်မာတွေ ဘယ်လို မြင်လဲ
Myanmar is implementing Unicode system and from 1 October service providers will switch from the popular Zawgyi to Unicode system. - မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး လူသုံးများတဲ့ ယူနီကုတ်ကို သုံးစွဲကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဌာနတွေကတော့ ဧပြီလကတည်းက ယူနီကုတ်ကို သုံးစွဲလာတာဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့...